मद्यपानको लत (Alcohol Dependence) - Khoj Sanchar
मद्यपानको लत (Alcohol Dependence)
मद्यपान भन्नाले रक्सी, जाँड, छयाङ, वाइन, बियर आदी कुनै पनि प्रकारका रक्सीजन्य पदार्थ पिउनुलाई जनाउँछ
मद्यपान गर्दैमा मद्यपानको लत लागेको भन्न मिल्दैन । तर मद्यपान नगरी एक दुई दिन पनि वस्न नसक्ने, आफ्नो नित्य काम गर्न नसक्ने, मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाउँदा विभिन्न शारीरिक र मानसिक लक्षणहरु देखिने र मादक पदार्थ सेवन गर्ने वित्तिकै देखिएका शारीरिक र मानसिक लक्षणहरु हराएर जान्छन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मदिरापानको लत लागेको रहेछ भन्ने वुझिन्छ । कहिलेकाँही मात्र मद्यपान गर्ने तर पिउन लागेपछि अत्यधिक पिउने र आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने वानी पनि खतरनाक हो ।
अत्याधिक मदिरा सेवन तथा मदिराको लतका कारण उत्पन्न हुने स्वास्थ्य समस्याहरु, आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक समस्याहरु तथा अन्य विकृतिका कारण अत्याधिक मदिरापान तथा मदिराको लत (Alcohol Dependence) ठूलो जनस्वास्थ्य समस्या भएको छ । मदिरा सेवन कै कारण झगडा तथा कुटपिटका घटनाहरु, अपराधीक कृयाकलापहरु, वैवाहिक समस्याहरु, दुर्घटना तथा चोटपटकहरु, निको नहुने रोगहरु र अकालमृत्यु समेत हुने गरेका छन् ।
मदिराको लत लागेका मानिसहरुलाई दिनदिनै रक्सी पिउनु पर्ने हुन्छ, उनीहरुले रक्सी पिउँदा धेरै पिउँछन । आज एकदिन पिउँदिन भनेर वस्न सक्दैनन् । आज मात्र पिउछु भनेर वस्न सक्दैनन् । रक्सीको लत लागेका मानिसहरुलाई रक्सी दिनदिनै नभई हुदैन ।
निम्न चारवटा लक्षणहरु छन भने त्यो व्यक्तिलाई रक्सीको लत लागेको रहेछ भन्न सकिन्छ ।
(१) रक्सीको तल तल धेरै लाग्ने र कति वेला पिउन पाइएला भनेर छटपटी हुने ।
(२) आज एकदिन रक्सी पिउदिन भनेर आफुलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने ।
(३) रक्सी थोरै पिएर नपुग्ने, धेरै पिउनु पर्ने ।
(४) कथम कदाचीत रक्सी पिउन पाएनन् भने विभिन्न लक्षणहरु जस्तै जीउ काम्ने, पसिना आउने, मन आत्तिने, खाना नरुच्ने, निन्द्रा नपर्ने आदी हुने ।
मदिराको लत लागि सकेपछि एक दिन पिउन नपाउदा पनि शरीर काम्ने, आत्तिने डराउने, छटपटी हुने आदी हुन्छ । त्यसकारण यस्ता व्यक्तिहरुले अनेक निहुँ पारेर पनि हरेक दिन रक्सी पिउँछन ।
मदिरा पिउने लत के कारणले लाग्छ ?
सिको गरेर (Learning factor):
सुरुमा अरुको सिको गरेर पिउने गर्छन । यिनीहरुलाई रक्सी पिउदा क्षणिक समयको लागि आनन्द आउँछ । थकाई मर्छ र रमाइलो लाग्छ । फेरी त्यस्तै रमाईलो लागोस र आनन्द आओस भनेर पटक पटक पिउँछन । चुरोट, सुर्ती तथा अन्य लागु औषधी जस्तै रक्सी पनि आदत पर्ने वा वानी पर्ने (addictive) पदार्थ हो । मदिरा लगातार सेवन गर्दा वानी पर्छ र लत लागीसके पछि छोड्न खोज्दा सकिदैन वा छोड्न निकै कठिन हुन्छ ।
वंशाणुगत कारण (Genetic):
आजकल धेरै रोगहरुमा वंशाणुगत कारण एक कारकतत्व मानिन्छ । जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम (Bronchial asthma), वात (Rheumatoid arthritis) आदीमा वंशाणुगत कारण एउटा हो । त्यस्तै डिप्रेसन (Depression), वाइपोलर डिसअर्डर (Bipolar disorder), स्किजोफ्रेनिया (Schizophrenia) र मदिरापानको लत (Alcohol dependence) आदी रोगहरुको एउटा कारण वंशाणुगत हो अर्थात वावु वा आमालाई मदिराको लत छ भने छोरा वा छोरीलाई मदिराको लत लाग्ने सम्भावना वढी हुन्छ । तर लत लाग्नै पर्छ भन्ने छैन ।
मानसिक रोग लागेको कारण (Mental disorder):
मानसिक चिन्ता, डर तनाव आदी हुँदा मन शान्त पार्न मदिराको प्रयोग गर्न सक्छन । रक्सी पिय पछि एकै छिन भए पनि चिन्ता र डर कम हुन्छ । नियमित रक्सी पिइ राख्दा वानी पर्छ । त्यस्तै गरेर डिप्रेसनमा, वाइपोलर डिसअर्डरमा, स्किजोफ्रेनियामा रक्सी पिउने वढी हुन्छ र यसको लत लाग्ने संभावना पनि वढी हुन्छ ।
मद्यपानको लतले के के खरावीहरु गर्छन ?
स्वास्थ्यमा नराम्रो असरः
मद्यपानले शरीर कै सवै अंगमा नराम्रो असर पार्छ । मुख, निल्ने नली, पेट, कलेजो र आन्द्रामा विभिन्न रोग लाग्छ । मस्तिष्कमा असर परेर सम्झने शक्तिलाई कम गर्छ, नशाहरुमा असर गर्छ, डिप्रेसन गराउछ, यौनशक्ति घटाउछ र मानसिक असन्तुलन (Alcoholic Psychosis) समेत गराउँछ ।
मद्यपानको लत लागेको व्यक्तिको घर, छिमेक, अफिस र सडक हरेक ठाउँमा समस्या पर्छ । श्रीमतीसंग झगडा, कुटपिट, केटाकेटीमा नकारात्मक असर, आर्थिक कठिनाई, व्यवसायमा घाटा, नोकरी भए सवैको हाँसोको पात्र र जागीर जाने डर, जड्याहाको उपनाम, झगडा, कुटपिट, रक्सीले मातेर हिड्दा लडेर लाग्ने चोटपटक आदी समस्यै समस्या हुन्छन । मद्यपानको लत लागेको व्यक्तिलाई घर परिवार, आफन्त वा कसैले पनि विश्वास गर्दैन ।
सडक दुर्घटना र मद्यपान:
मद्यपान गरेर सवारी साधन चलाउदा दुर्घटना हुने र आफ्नो तथा अरुको ज्यान जाने खतरा ज्यादै वढी हुन्छ ।
गर्भवती महिला र मद्यपान:
गर्भवती महिलाले कहिलेकाँही मात्र मद्यपान गरेपनि गर्भमा रहेको वच्चालाई नराम्रो असर पर्छ । सुस्तमनस्थिती भएको तथा शरीरको कुनै अङ्ग कमजोर भएको वच्चा जन्मिने खतरा हुन्छ ।
मद्यपानको लत लागेको हो भनेर कसरी चिन्ने?
मद्यपानको लत लागेका विरामीहरु अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रमा जचाउँन आउँदा प्राय रक्सी पिउने कुरा वताउदैनन् । रक्सी पिउने बानी कै लागि उनीहरु जचाउन पनि आउदैनन् । वढी रक्सी पिएका कारण वा लामो समयसम्म मद्यपान गरेका कारण भएका स्वास्थ्य समस्याहरु जचाउन आएका हुन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो स्वास्थ्य समस्या मद्यपानका कारण हुन सक्छ भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ र विरामीलाई रक्सी पिउछन/पिउदैनन, पिउछन भने कसरी पिउछन, कति पिउछन् जानकारी लिनु पर्छ ।
रक्सीको लत लागी सकेकाहरुले प्राय विहान र दिउँसो पनि पिउने गर्छन् । यीनीहरुमा जतिवेला पनि रक्सी पिउनेहरुको मुखवाट रक्सीको गन्ध आएको हुन्छ र चिन्न सजिलै हुन्छ । यिनीहरुसंग पनि कतिवर्ष देखि पिउने वानी छ र के कति पिउछन थप जानकारी लिनु पर्छ ।
मद्यपानको लत लागेकाहरु कहिले काही छारेरोगमा जस्तै वेहोस भएर अस्पतालमा जचाउन आएका हुन्छन । मद्यपानका कारण हुने Fits लाई Alcohol withdrawal fits भनिन्छ । मद्यपान गर्न छाड्ने हो भने यस्तो Fits आफै हराएर जान सक्छ ।
मद्यपानको लत लागेको विरामीहरुले एक दिन पिउन नपाउँदा पनि केही शारीरिक लक्षणहरु देखिन्छन जस्तै दुवै हात तथा वा सवै शरीर थर थर काम्ने (Alcoholic tremors), वाकवाकी लाग्ने, पसिना आउने, डराउने, भाग्न खोज्ने आदी ।
मद्यपानको लत लागेका विरामीहरुले एक दुइ दिन पिउन पाएनन भने शरीर काम्ने (Tremors), वाकवाकी लाग्ने, पसिना आउने आदीको साथसाथै भ्रम हुने र राम्रो होस नहुने समेत हुन सक्छ । हुदै नभएको कुरा देख्ने (सर्प, विक्षी, किरा, जनावर आदी) वा अरुले नसुनेको आवाज सुन्ने पनि हुन सक्छ । यो अवस्थालाई Alcoholic Delirium Tremens भनिन्छ । Alcoholic Delirium Tremens का विरामीले राम्रो उपचार पाएनन् भने ज्यान पनि जान सक्छ । त्यस कारण विरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्नु पर्छ । अर्थात यस्ता विरामीहरुलाई जतिसक्यो छिटो अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्छ।
मद्यपानका कारण हुने माथि भनिएका विभिन्न समस्याहरु तथा रोगहरु अत्याधिक मद्यपान गर्नाले वा सधै लामो समय सम्म मद्यपान गरेर लत लागि सकेकाहरुमा देखिन्छ । रक्सी पिउदै नपिउनु सव भन्दा उत्तम हो । रक्सी पिउनेहरुले अत्याधिक नपिउने हो भने र लत लाग्ने गरी नपिउने हो भने पनि स्वास्थ्य समस्या लगायत अन्य समस्याहरु पनि कम हुन्छन् । यसको लागि मद्यपानको कारण के के हुन सक्छ, नपिउदाको फाइदा के के छन र अत्याधिक पिउदा र लत लाग्दा के के हुन सक्छ आदी वारे जनचेतना वढाउनु पर्छ ।
अस्पतालमा जचाउन आएको वेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरुले विरामीलाई रक्सी पिउने वानी छ कि छैन सोध्ने र यदी छ भने रक्सी पिउदा के खरावी हुन्छ जानकारी दिने र मद्यपान नगर्न सल्लाह दिनु पर्छ ।
रक्सीको लत लागिसके पछि भने उपचार त्यति सजिलो छैन । लत लागेकाहरुले पिउन नपाउदा तल तल हुने, छटपटी हुने, वाकवाकी लाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, पसिना आउने आदी हुन थाल्छ र त्यस्तो हुन नपाउदै उनीहरु रक्सी पिइहाल्छन् । सर्व प्रथम, लत छुटाउनका लागि विरामीको दृढ इच्छा हुनु पर्छ । आफु भित्रै वाट छोड्छु भन्ने इच्छा जाग्नु पर्छ । आफ्नो भित्री इच्छा छैन र परिवारको दवावमा मात्र उपचार गर्ने हो भने उपचार सफल हुदैन, अर्थात केही दिन नपिए पनि फेरी सुरु गरि हाल्छन ।
रक्सी छोड्ने इच्छा शक्ति वलियो छ भने सजिलै छोड्न सकिन्छ । यसको लागि करिव २ हप्ता जति अस्पतालमा भर्ना भएर विशेषज्ञको रेखदेखमा औषधीहरु लिनु पर्छ । उपचार पछि पनि वेला वेलामा फलोअप गर्नु राम्रो हुन्छ ।
Khoj Sanchar October 24, 2020 October 24, 2020
फुड पोइजनको घरेलु उपचार
Khoj Sanchar August 30, 2020 August 30, 2020
सुन्दर शरीर भन्दा पनि स्वस्थ शरीर बनाउन तिर लाग्नुहोस्